သုံးသပ်မှုများ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label သုံးသပ်မှုများ. Show all posts
ဦးကိုနီကို ကြည်လင်း လက်မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်တယ် ဆိုတာရော ဟုတ်ရဲ့လား ?
ကျည်ဆံ5ထောင့်ထည့် ဆုံလည် သေနတ် 1လက် / ကျည် 10 ထောင့်ထည့် 9mm Pistol 1လက်…
ဦးကိုနီကို ဆုံလည် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့တယ်.. ဟုတ်ပြီ .. ကျည် ၄ ထောင့် ကျန်တယ်..
ကားဆရာ အာဇာနည် ကိုနေဝင်း ကိုရော ဘယ်သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့ ပါသလဲ…ကိုနေဝင်းရဲ့ ဆီးအိမ် အထက်နား သေနတ် ဒဏ်ရာဟာ မည့်သည့် ကျည် အမျိူးအစားနဲ့ ပစ်ခတ် ခဲ့တာလဲ…
9mmPistol နဲ့ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ဥပမာဆိုကြပါစို့…….
ကျည် ၉ ထောင့် ကျန်တယ်…
တရားခံကို ကားပေါ်ကနေ ဝိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီး ချိန်မှာ ကြည်လင်း ဟာ လက်ထဲမှ ဆုံလည် သေနတ်ကို အောက်သို့ ချပြီး…ခါးကြားမှ 9mm Pistol နဲ့ ပြန်လည် ပစ်ခတ် ခုခံခဲ့ တယ်လို့ ပြောဆို ထားကြတယ်….
ဟုတ်ပြီ တရားခံ ကိုင်ဆောင် လာသော သေနတ်2လက်ပေါင်း ကျည် 15 ထောင့်/
ဦးကိုနီ သေနတ် ဒဏ်ရာ 1 ချက်ကျည် 1 ထောင့်
ကိုနေဝင်း ဒဏ်ရာ 1 ချက် 1 ထောင့်
ဖမ်းဆီးချိန် ပြန်လည်ခုခံ ပစ်ခတ် 1 ထောင့်
အားလုံး ကျည်3ထောင့်ပါ…
သက်သေခံ သိမ်းဆည်း ရမိချိန် လက်ကျန်ကျည် 13 ထောင့်/
#ကျည်ဆံ 1 ထောင့်ပို
ကျည် 1 တောင့် ဘယ်က ရောက်လာ ခဲ့ပြီလဲ?
လက်ရှိ တရားခံဟာ သရုပ်ဆောင် အဆင့်/ အခင်း ဖြစ်ပွားပြီး.. ပြန့်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံကြောင့် သူပစ် ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သက်သေခံ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခံ ခဲ့တယ်..သရုပ်ဆောင် ခဲ့တယ် ဆိုရင်ရော…………
သက်သေခံ ဓါတ်ပုံ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရင်း အနီးနားမှ အခြား တဦးက ၎င်းနည်းတူ5ထောင့်ထည့် ဆုံလည် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး အသာ အယာ ရှောင်တိမ်း ခဲ့တယ် ….
နောက်ပြီး သရုပ်ဆောင် တရားခံ မှ ပြေးထွက် လာပြီး….ကားဆရာများ (ကိုနေဝင်း) အပါအဝင် ဝိုင်း အလိုက်မှာ သူတကယ် ခံရတော့မယ် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ #ခင်ဗျားတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး ပြောရင်း အသင့် ပါခဲ့သော ဆုံလည် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့ချိန် ကားဆရာ ကိုနေဝင်း အသက်ဆုံး ခဲ့တယ်….
Taxi ပေါ်သို့ တက်ပြေးပြီး..လွတ်မြှောက်ရန် ကြံစည်ရင်း ဝိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးချိန် လက်ထဲမှ သေနတ်အား အောက်ချပြီး…အသင့်ပါ ခဲ့သော 9mm Pistolနဲ့ 1 ချက်ပစ်ပြီး ခုခံဖို့ ကြိုးစားရင်း အဖမ်းဆီး ခံခဲ့ ရပါတယ် ဆိုရင်……
သက်သေခံ လက်ကျန် ကျည် 13 ထောင့်ဟာ ညီမျှနေ သလို အဓိက တရားခံ လွတ်မြောက် နေတယ် လို့ ယူဆရရင် ကျွန်တော့ အတွေးတွေဟာ ညံ့လွန်း ရာများ ကြနေမလား….
From : လွင်ပြင်သတင်း
Originally published at - http://www.lwinpyin.com/2017/02/9mm-pistol.html
ကဏ္ဍ သုံးသပ်မှုများ, ဆောင်းပါး
NLD အစုိုးရသစ် ရက် ၁၀၀ အတွင်း ဘာတွေ လုပ်နုိုင်ခဲ့သလဲ?
ဒေါ်စု ဦးဆောင်သော NLD အစုိုးရသစ်သည် ရက် ၁၀၀ အတွင်း ထူးထူးခြားခြား မဆောင်ရွက်နုိုင်ဟု သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။ (ဓာတ်ပုံ-MOI)
သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အာဏာ ရယူမှု ရက် ၁၀၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ်၏ ရက် ၁၀၀ အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည့် ကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် အပြောင်း အလဲရှိ၊ မရှိ ဆိုသည့်အပေါ် ပြည်သူလူထု အပါအဝင် နယ်ပယ် အသီးသီးမှ စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြသည်။
သို့ဖြစ်ရာ အစိုးရသစ်၏ အာဏာလွှဲပြီး ရက် ၁၀၀ အတွင်း တိုးတက်မှု၊ လိုအပ်ချက်စသည့် အခြေအနေများ အပေါ် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်မှုများကို ဧရာဝတီက ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားပါသည်။
ဦးသိန်းထွန်း ( ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ)
အန်ကယ် မြင်တာတော့ မျှော်မှန်းသလောက်တော့ ခရီးမရောက်ဘူး ထင်တယ်။ သို့သော်လည်း သူက လူသစ်၊ အစိုးရသစ် ဆိုတော့ အတွေ့ အကြုံတွေ အခြေအနေ တွေကို ကြိုးစားလေ့လာ နေရတဲ့ အတွက် အချိန်တော့ ထပ်ယူ ရအုံးမယ် ထင်တယ်။ ရက် ၁၀၀ နဲ့တော့ သိပ်လုံလောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ရက် ၁၀၀ မှာ စီးပွားရေးထက် နိုင်ငံရေးကို ကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ ဇောင်းပေးတဲ့ သဘော ရှိတယ်။ အန်ကယ် ကတော့ စီးပွားရေး ဘက်ကို နည်းနည်း ဇောင်းပေးရင်
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဘန်ကောက် သွားတာတွေ အပါအဝင် တခြား ကိစ္စတွေက စီးပွားရေးနဲ့ သိပ်မဆိုင်ဘဲ နိုင်ငံရေးဘက် များတာပေါ့။ စီးပွားရေးကို နည်းနည်းလေး အခြေခံလေး ယူပြီး ဇောင်းပေးဖို့ပါ။ စီးပွားရေး သမားတွေ ကတော့ အကုန်မျှော်လင့်တာပဲ။ တိုင်းပြည်က စီးပွားရေးကောင်းမှ ကျန်တဲ့ ဟာတွေပါ ကောင်းတာကိုး။ လူတွေကတော့ အစိုးရသစ်ပေါ်မှာ မျှော်မှန်းထားတဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။
ဦးသန်းဦး (မဏ္ဍိုင် အိမ်ခြံမြေ ကုမ္ပဏီ)
အစဆိုတာ ကတော့ ဘယ်ဟာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခက်တာပဲ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ပြီးတော့ အခုမှ ပြန်စ ရတာလေ။ အဲဒီ အစက အခြား အစထက် ပိုခက်ခဲ ပါတယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင် ဒီအစိုးရက ပထမ အချက် ပြည်သူတွေ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ထားတယ်။ ဒါတောင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မပါဘူးပေါ့။ ဒုတိယ အချက်က အစိုးရ အနေနဲ့က အရပ်ဖက် ပညာရှင်တွေ
တော်တော် များများကို ထည့်သွင်း အသုံးပြု ထားတယ်။ အားပြု ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ တတိယ အချက်က ဘာလဲ ဆိုတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြေငြာ ထားတယ်။ သူတို့လည်း အခုအချိန် အထိ အမှားအယွင်း နည်းစွာနဲ့ လုပ်နေ ကြတယ်။
အဂတိ လိုက်စားမှုကို လုံးဝ လက်မခံတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တယ်။ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် ကနေ အောက်ခြေ အထိ အဂတိ လိုက်စားမှု လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ လုံးဝ လက်မခံဘူး။ နံပတ် ၄ အချက်က သူတို့ဟာ တကယ့်ကို နိုင်ငံ ချစ်စိတ်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို တကယ် လိုချင်လို့ နှစ်များစွာ ဒုက္ခခံပြီး ဒီအချိန်ထိ ရောက်အောင် နေလာခဲ့တာ။
အဲဒီတော့ ပြောချင်တာက ဒီလို အားသာတဲ့ အဓိက အချက် ၄ ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ တခြား ပုဂ္ဂိုလ်များ ပြောသလို စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းတာ၊ အုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းမှာ လိုအပ် တာတို့ အတွေ့ အကြုံနည်း တာတို့ ရှိကောင်း ရှိမှာပေါ့။
အဓိက ပြောချင်တာက အတွေ့အကြုံနည်းပေမယ့် အားသာချက် ၄ ချက်ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ အစိုးရ တရပ်နဲ့ ပြည်သူဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို တည်ဆောက်တဲ့ နိုင်ငံ ၁ နိုင်ငံမှာ ရက်ကို ရေတွက်ပြီး ခရီးရောက်၏၊ မရောက်၏ ဆိုတာ ကို တိုင်းတာ တာထက် ခုနက အားကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို ရက် ၁၀၀ မှာ အခြေခံ ချနိုင် သလောက် ချပြီး ကာလ ကြာရှည် မှာ အခြား အစိုးရတွေထက် စာရင် ပိုခရီးရောက်ပြီး အောင်မြင်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်လေး (ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဒု ဥက္ကဋ္ဌ)
စီးပွားရေး သမားတွေ ကတော့ လက်တွေ့ ကြပါတယ်။ အကြီး အကျယ် ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲ သွားလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်း ပြောင်းလဲ သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ မမျှော်လင့် ထားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းလာတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် လာတယ်လေ။ ဒီဟာကို ချက်ခြင်း ပြင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ သိကြပါတယ် မမျှော်လင့် ထားဘူး။ ဒါပေမယ့် အများ ဖြစ်စေချင် တာကတော့ အစစ အရာရာကို လုပ်ရ ကိုင်ရတာ မူဘောင် သတ်သတ် မှတ်မှတ်နဲ့ ရှိပြီး ကစား ကွက်က ထင်သာ မြင်သာ ရှိစေ ချင်တာပေါ့။ အဓိကက အဟန့် အတားတွေကို ပယ်စေ ချင်တာ ကြိုးနီ စနစ်တွေကို ပယ်စေ ချင်တာပေါ့။
နောက်ဒေသ တွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အနေ အထားကို ဖြစ်စေချင်တယ်၊ ဒါက ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ရက် ၁၀၀ အတွင်းမှာ ချက်ခြင်း ဥုံဖွဆိုတာနဲ့ မရပါဘူး။ အထိုက် အလျောက် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ မလွှမ်းမိုး ခံရရင် တော်ပါပြီ။ အရင်းအနှီး နဲ့ အတိုးနှုန်းတွေ သက်သက် သာသာရဖို့နဲ့ မြေနေရာကို သက်သက် သာသာနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင် ဖို့တော့ လိုတာပေါ့၊
ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းတွေ တက်လာစေချင်လို့ပါ။ ဒီအတွက် အရင်းအနှီး၊ နည်းပညာ၊ ဈေးကွက် တွေ လိုတာပါ။
ဒါတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် ရေရှည်မှာလိုချင်တာပေါ့။ နေ့ချင်း ညချင်းတော့ သူတို့ မမျှော်လင့် ကြပါဘူး။ ကောက်ရိုးမီးလို လက်ပူတိုက်တာကိုလည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေက မလိုလားပါဘူး။
ဦးရောဘတ်စန်းအောင် (တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ)
အစိုးသစ် အာဏာ လွှဲပြောင်း ရယူပြီးတဲ့ ရက် ၁၀၀ အတွင်းမှာ တရား စီရင်ရေးနဲ့ ပတ်သက် လို့တော့ ပြောင်းလဲမှုတွေ မရှိသေး ပါဘူး။ တိုင်ဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ တရား လွှတ်တော် တွေမှာ အမှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စစ်ဆေး ကြားနာတာတွေ မလုပ်ဘဲ အကျဉ်းချုပ် နည်းနဲ့ပဲ အမှုတွေကို ပလပ်တဲ့ တာတွေက အစဉ်အလာ တွေလိုပဲ ရှိနေသေးတယ်။
တရားမမှု တွေမှာဆို တံဆိပ်ခေါင်း ခွန်တွေက အများကြီး ကပ်ရပြီး တကယ် တမ်းတော့ ၁၀ မိနစ်လောက် ပြောပြီး တာနဲ့ အမှုကို ပလပ် လိုက်တော့ အရမ်းကို နစ်နာပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရသစ် တရပ် အနေနဲ့တော့ ရက် ၁၀၀ လောက် အတွင်းမှာ နှစ် ၅၀ လောက် အမှိုက်ပုံကြီးကို ရှင်းနိုင် မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးရဲထွန်း (ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း)
အစိုးရသစ်တရပ်ရဲ့ ပထမဆုံး ရက် ၁၀၀ ဆိုတာက သူ့သက်တမ်းမှာ ဘာတွေ လုပ်ဆောင် သွားမလဲ ဆိုတဲ့ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်း ချက်တွေကို အကဲဖြတ် ရမယ့်အချိန်၊ ဆက်လုပ်မယ့် ဟာတွေအတွက် အစပျိုးရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ မအောင်မြင် တာတွေကို သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်ဆောင် ရမှာပါ။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက် လို့ လက်ရှိ အစိုးရက ပြည့်ပြည့် ဝဝ မလုပ်နိုင် လိုက်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ နောက်တချက်က အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းနဲ့ ဥပဒေပြုရေး ပိုင်းတို့ အကြား ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းမှုတွေ အားနည်း တာတွေ၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှု မရှိတာတွေ
ဖြစ်နေသေးတယ်။ လက်ရှိ လွှတ်တော်က မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ထင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပယ်ဖျက်ခဲ့တာတွေက ကောင်းပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေအရ ဥပဒေတခု ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမား မဖြစ်တာကိုတော့ သိပ်အံ့သြစရာမရှိပါဘူး။ ကောင်းတဲ့အချက်အနေနဲ့ကတော့ ဒီအစိုးရက အကျင့်ပျက် ခြစားမှု ကင်းတဲ့အစိုးရ၊ ပြည်သူ တွေတင်မြောက်ထားတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင့် နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေ ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့် ပျက် ခြစားမှု ကင်းတာ တခုနဲ့တင် အရင် အလေအလွင့် များခဲ့တာတွေထက် အများကြီး သာမယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။
စိုင်းအောင်မြင့်ဦး ဗဟုို သုတေသနနှင့် ပညာရေးစင်တာ ရှမ်းလူငယ် ကွန်ယက် (ရန်ကုန်)
ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း ဆိုတာ ပြင်ဆင်ချိန်ကာလ လို့မြင်ပါတယ်။ အရင်အစိုးရ လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကို စိစစ် သုံးသပ်တဲ့ကာလလို့ မြင်ပါတယ်။ ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း က စီမံကိန်း တွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ဆောက်လုပ်ရေးတွေ ဆက်မလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဒီရက်ပိုင်း မှာ ရပ်ဆိုင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတဲ့အပိုင်းတွေ ဘာလုပ်မလဲ၊ ဘယ်အရာကို ဦးတည်သွားမလဲ ဆိုတာ ကို ရက် ၁၀၀ မှာ ချမပြတဲ့ အတွက် အောင်မြင်မှု အားနည်းတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း လမ်းပိုင်းကို ရက် ၁၀၀ အတွင်းမှာ အကောင်းဆုံး ပြင်မယ်လို့ ပြောပေမယ့် အခုထိ မလုပ်ဆောင် ပေးသေးပါဘူး။ ရှမ်းပြည်နယ် ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း မှာ မြောက်ပိုင်း ကိစ္စ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်းကို မပြောတာ အားနည်းချက်ပါ။ ရပ်ဆိုင်းတဲ့ စီမံကိန်း ၂၀ ခုကို ချမပြ တာလည်း အားနည်းချက် ပါပဲ။ ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကို ထည့်တာ မဖြစ် သင့်ပါဘူး။ ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း ဆိုတာ ပြင်ဆင် ချိန်ပါပဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းမှာ ထည့်တာတော့ လုံးဝ မသင့်တော်တဲ့ အရာတခုပါ။
ဦးခွန်ထွန်းဦး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဥက္ကဋ္ဌ)
ငြိမ်းချမ်းရေးက စလုံးရေ စမှ မရှိသေးတာ။ ၂၁ ပင်လုံ ဆိုတာလည်း ဘယ်လို ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာ ပြောလို့ မရသေးဘူး။ အခုမှ ဟိုဘက်က လူတွေ (လက်မှတ် မထိုးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့) တွေကို တွေ့ရုံပဲ ရှိသေးတာ။ သူတို့ တက်လာ ရင်တော့ ဖြစ်မှာပေါ့။ တက်မလာဘူး ဆိုရင် မဖြစ်ဘူး။ အခု ကျနော် ကြားနေတာက ပင်လုံကို လုပ်မယ် ဆိုရင် ၁ ချက်က တော့ အခြေ အနေ အရ ပြောရရင် ပင်လုံ ကိစ္စနဲ့ လုပ်မယ် လို့ ထင်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ပင်လုံ ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ ၁၉၄၇ခုနစ် မှာ သဘောတူညီတဲ့ ဟာတွေ မအပ်စပ်ဘူး၊ နိမ့်ကျတယ် ဆိုရင်တော့ ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။ တိုင်းရင်းသား တွေကလည်း ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်နက်ကိုင် ခဲ့ကြတယ်။ ကျနော် အဲဒီလို မြင်တယ်။
ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းမှာ ပြည်သူလူထုကို ချမပြတဲ့ အပေါ်မှာ မေးစရာ မလိုပါဘူး။ ကတိ ကဝတ် ပေးလိုက်၊ ဖြစ်မလာ လိုက်ဆို တာ မဆန်းတော့ဘူး။ လုပ်စရာ ရှိတာတွေက အများကြီးပါ။ တခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ ဗဟိုအစိုးရ က ဘယ်လိုမူနဲ့ သွားမယ် ဆိုတာတောင် မသိရသေးဘူး။ ရှမ်းပြည် ကတော့ ပိုဆိုးမှာပေါ့။
အစိုးရသစ် အပေါ်မှာကတော့ နည်းနည်းပါးပါး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း တော့ အားရကျေနပ်မှု ရှိပါတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/interview/2016/07/09/118143.html
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း, သုံးသပ်မှုများ